Mail Pilot 2, fanavaozana izay mbola tsy ampy | Vaovao IPhone
Mail Pilot dia teraka efa ho 3 taona lasa izay tao Kickstarter ho fomba vaovao hitantanana ny mailakao. Nanomboka teo dia nankafizin'ny dokambarotra tamina fampahalalana marobe tao amin'ny haino aman-jery manampahaizana manokana, na dia teo aza ny fahitan'ny mpampiasa fa mahantra foana. Nampandrenesina taloha ela be, ny fanavaozana vaovao dia hita ihany izay nitady ny fanatsarana bebe kokoa ny fampiharana sy ny famahana ny hadisoana sasany notsikerain'ny mpampiasa, fa ny tena izy dia mbola lavitra ny mendrika ny hibodo io toerana io no omen'ny maro azy, karama lavitra noho izany ny vidiny mihoapampana amin'izany.
1 Estetika tsara fa tsy dia miasa loatra
2 Ny tombam-bidinay
Estetika tsara fa tsy dia miasa loatra
Tokony ekena fa Ny endrik'i Mail Pilot dia tena tsara, na toa izany amiko. Raha tsy misy pejy lehibe, loko maivana, mangarahara, menus sliding ... Amin'io lafiny io dia tsy misy azo omena tsiny. Na eny, satria ny famolavolana dia toa ny zava-dehibe indrindra tamin'ny fampivoarana ity fampiharana ity, na dia izany aza dia fampiharana tsy niniana natao.
Tsy zava-baovao ny fihetsika rehefa manemotra mailaka na manangona azy io. Na ny fiheverana ny mailaka dia tokony hatao. Na ny mailaky ny mailaka amin'ny iOS aza, izay maro amintsika toa kely dia efa mampiditra ireo fiasa ireo. Ny fitazonana mailaka iray ary "manipy" azy amin'ny iray amin'ireo sisin'ny efijery mba handefasana azy any amin'ny fako, ny fofonaina, ny fandaharam-potoana na ny arisiva dia mety hahaliana anao amin'ny fotoana voalohany anaovanao azy. SAINGY tsy manana bokotra hamafana mailaka rehefa mijery azy ianao tsy azo avela io, toy ny fanatanterahana paompy fisintomana maromaro hanatanterahana izany asa izany.
Tsy maintsy manao tsindry bokotra maromaro ihany koa ianao ary mivezivezy amin'ny menus samihafa mba hahafahanao miditra amin'ny fampirimana ao amin'ny kaonty mailakao. Tsy lazaina intsony fa sarotra ny mahafantatra hoe kaonty aiza ianao amin'izao fotoana izao, na raha ao anaty lovia miray ianao. Ny fomba hidirana amin'ny menio avy amin'ny boaty na ny fomba fiverenana mankany amin'ny boaty avy amin'ny toerana hafa dia iray amin'ireo endrika malaza indrindra amin'ny Mail Pilot 2, fa ny tena izy dia matetika ny zavatra azonao dia ny fampisehoana ny foibe fampandrenesana an'ny iOS, satria ny fihetsika dia mitovy.
Ny teboka iray manohana ny Mail Pilot 2 (tsy ho ratsy ny zava-drehetra) dia ny fomba fametrahana ireo rakitra avy amin'ny serivisy fitehirizana rahona samihafa, na avy amin'ireo rindranasa napetrakao aza. Vitan'izy ireo tsara ny nametraka azy io Ary angamba iray amin'ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ity fampiharana mailaka ity izy io. Raha tsy mamela ny rindrambaiko ianao dia afaka mampiditra kambana amin'ny serivisy sy rindranasa maro mifanaraka aminy.
Ny fampiharana dia manolotra safidy fanamboarana sasany, manova ny loko miaraka amin'ny fotsy manjavozavo an'ny Mail Pilot 2. Ary ao anatin'ny safidy fanamboarana no ahitantsika ny fampandrenesana fanosehana, na koa, ny tsy fisian'ny fampandrenesana fanosehana.
Mail "Pilot 2" mirehareha "tsy misy fampandrenesana fanosehana ho an'ny fiainana bateria lava kokoa. Ampiasao ny fanavaozana ny mombamomba ny iOS 8 handefasana mailaka mifototra amin'ny fampiasana ny fitaovanao sy ny fomba fampiasanao ilay fampiharana. Mail Pilot 2 dia rindranasa iray izay, araka ny filazan'ny mpamolavola azy, dia mianatra avy amin'ilay mpampiasa. Tsy maintsy mpampianatra ratsy toetra be aho satria tsy nianatra na inona na inona tamiko. Tsy mbola nampandre ahy ny fahatongavan'ny mailaka iray izy, tsy tamin'ny tsindry intsony, fa tamin'ny alàlan'ny fampandrenesana rehetra. Bebe kokoa, rehefa nanokatra Mail Pilot 2 aho dia tsy maintsy niandry ho an'ny fampiharana manavao ny atiny hahafahany mahita ny mailako.
Raha izany rehetra izany dia ampianay ny zava-misy fa ny rindrambaiko dia manana vidiny mahazatra € 9,99 (ankehitriny raha ny fisondrotana fanentanana ahena ho 7,99 €) ny valiny farany dia tsy misy isalasalana fampiharana tsy soso-kevitra, indrindra ny fiheverana ireo karazana fampiharana maimaim-poana izay mahavita tsaratsara kokoa, ny sasany mahatratra ny ambaratonga avo indrindra toa ny Fikarohana amin'ny iOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Mail Pilot 2, fanavaozana izay mbola tsy ampy
Vintana farany hampihena ny iOS 8.1.2
Ny fisoratana anarana amin'ny mailaka Outlook dia mahazo fiasa vaovao